Top 5 emulators GameCube - ciyaaro kulan GameCube on aaladaha kale ee
Ayaa si rasmi ah GameCube sii daayay Nintendo dalka Japan sannadkii 2001, waxa uu ahaa Console ugu horeysay oo ay u isticmaali lahayd cajalladaha indhaha sida kaydinta hoose. Cabbirka disc la smaller.it taageeray ciyaaraha online dhex adabtarada modem oo la xiran ayaa laga yaabaa in aad aad u gaarka ah ka hor Gameboy dhex cable link.
Nintendo u suurtagashay in ay iibinta 22 milyan oo unug oo dunida oo dhan ka hor inta aan la joojiyey 2007. Waa hagaag, haddii aan ka hadlo naqshadeynta, naqshadeynta GameCube ahaayeen wax yar ka fiican qeexay badan PS2 Sony, laakiin users Madaxweyne Siilaanyo la kulmi muuqaallo kale ka fiican yahay kasaarka ciyaarta.
Qaabka sedjibeke Casriga
4 dekedaha xukuma
2 kaadhka xusuusta, naadi
485MHz processor caadadii la 162MHz naqshadeynta caadadii processorCapacity u modem la xidhiidha mustaqbalka / broadband
40MB guud ahaan xusuusta; 2.6 GB per bandwidth xasuusta labaad
Geesoolayaashu 12 milyan halkii labaad; texture akhri bandwidth 10.4 per GB labaad
64 channels audio
Cabirka 4.5 "x 5.9" x 6.3 "
3-inji Technology cajalid indhaha (1.5 gigabytes)
Sababaha nahay GameCube:
Maanta waxaan heysanaa badan qalabka Console sare aan ku raaxaysan karaan, inkasta oo GameCube looma tixgelin karo sida emulator ah run ahaantii jir ah, laakiin dadka qaar ayaa weli jeclaan lahaa inuu ka ciyaaro GameCube horumariyo kulan ee nidaamka, si horumarinta ay ka shaqeeyeen sano tan iyo isku dayayaan in ay ku daydaan nidaamyada GameCube gal qalabka cusub ee horumarsan.
Taageerayaan Operating Systems beegti iyo xaasidnimo,
Wondershare MirrorGo - kaamil ka Android Emulator u PC
Top Five Emulators In Market:
Haddii aad raadinayso Emulator ah in ay sii wadaan kulan GameCube, Nintendo Wii oo aad kombuutarka markaas hoomboro Emulator ama hoomboro EMU waa kaamil ah oo aad u. Kulan intooda badan wada ama cayayaanka yar yar ay maamulaan. Waxaad ciyaari karo kulan aad jeceshahay ee Tayada Qeexid Sare. Tani waxay noqon kartaa feature ah xusid u consoles'ka gaar GameCube iyo Wii uma muuqato inay noqon awood. Waxa ugu fiican ee ku saabsan hoomboro Emulator waa in ay tahay il furan oo qof kasta oo mashruuca ku shaqayn karaa waxa ku dhiirrigeliney in ay horumar ee emulator ah
Waxaad Reload karo xaalad ka dib markii lagu badbaadinayo.
Anti-Aliasing kana soobixiya wax u dareento cusub in ay sawiro ka ciyaarta uu u muuqdo mid la yaab leh oo ku saabsan emulator hoomboro
Waxaad ka ciyaari kara toy kulan jecel saabsan xallinta 1080p
Taageerada Wiimote iyo Nunchuck waayo-aragnimo fiican ciyaaraha
Emulator Fast iyo deggan.
Graphics yihiin si ka fiican Console asalka
Gacanta ku Configurable waayo-aragnimo ciyaaraha kama dambaysta ah iyada oo taageero Wiimote
Sidoo kale taageertaa kulan Console Wii.
Dolwin emulator u Console Nintendo GameCube waxaa asal ahaan ku saleysan Power PC processor derivative. Emulator ayaa waxaa loogu tala galay in afka C adeegsanaya farsamooyinka sida turjubaan oo kaliya in Majalada mar. Dolwin uu leeyahay user interface aad u saaxiibtinimo. Waxa ay taageertaa dega Khayaadka oo heer sare ah iyo xaasidnimo hardware ku salaysan yahay plugins nidaamka. Emulator Dolwin waa mid aad sax ah laakiin waxay u baahan tahay computer oo degdeg ah, laakiin weli ma ordi karaan kulan ganacsiga ilaa hadda.
Khayaadka oo Aad u sax ah
Hab screen Full taageeray.
Khayaadka oo Heer Sare Ah oo user saaxiibtinimo interface.
Xaasidnimo waa arrin cajiib ah
Graphics aad u fiican tahay
Ma ciyaari karo kulan ganacsi
Wuxuu u baahan yahay PC wuxuu Soomi waayo-aragnimo ciyaaraha wanaagsan
3.Whine Cube Emulator:
Kasaarka cabashada waa emulator kale kaasi oo horumarsan ee C ++ luqadda. Waa inay awoodaan inay ku shuban iyo ordi DOL, qaab dartaa la naqshadeynta weyn iyo dhawaaqa. Emulator Tani waxba uma ordo wax kulan ganacsi laakiin ordi karaan dhowr kulan homebrew. Waxa kale oo ay siiyaan fursad u noqon jaridda Debug ama on. Emulator waxa uu leeyahay Majalada firfircoon oo qof turjubaan ah lagu daray ayaa sidoo kale waxaa jira nidaam HLE heer hoose ah.
Waa emulator degdeg ah
Taageerada dega Khayaadka oo heer sare ah.
Nidaamka HLE heer hoose ay taageerayaan
Waa kulan emulator degdeg ah ordi karaa jir PC ee
Naqshadeynta Great iyo taageero codka
Miyuu cayayaanka badan iyo shilalka mararka qaarkood.
Jaridda Debug waa iska by default had iyo jeer
No DSP disassembler
Emulator waxa loo sameeyay bartamihii 2005-laakiin waa emulator aad u dhamaystirnayn GC waxaa la sii daayay aan sababo aan la garanayn. Emulator kani waxa uu isticmaalaa farsamooyin recompilation si loo gaaro xawaaraha wax ku ool ah.
Inkasta oo xaasidnimo ah ma aha dhamaystiran laakiin weli ma ahan xun oo dhan. Haddii aad isticmaalayso emulator taas maanka ku hayo oo keliya waxaad u baahan doontaa in badan oo shilalka iyo cayayaanka.
Waa emulator oo degdeg ah.
Emulator An aan dhammeystirneyn oo aan run ahaantii ma xukumi karo gabi ahaanba muuqaalada.
Ra'yiga xaasidnimo Fast.
Badan cayayaanka iyo shilalka
Cube waa emulator GameCube ah. Waxa ay u ogolaataa kulan GameCube in la ordi on Windows PC ah, Linux PC ama Mac .Gcube waa il furan GameCube emulator ah oo la sameeyey iyada oo ujeedada ugu weyn ee socda ugu yaraan hal kulan oo ganacsi si buuxda kudayasho. Emulator ma ordo wax kulan ganacsi oo weli sii daayo iyo hadda waxaa loogu talagalay barnaamijyada homebrew.
Source emulator Open u tahay horumarka dheeraad ah
Oo ujeedkiisu yahay in ay maamulaan kulan ganacsi
Heerka dhawaaqa sare iyo naqshadeynta xaasidnimo
Taageero Sound ka mid ahaa
Ma ordi karaan kulan ganacsi weli.
Miyuu cayayaanka iyo shilalka badan.
Android Games APK-Sida loo Download Free Android Games ee Full Version
Best Games UJEEDDO qariyeen Android
> Resource > Emulator > Top 5 emulators GameCube - ciyaaro kulan GameCube on aaladaha kale ee